इटहरी उपमहानगरपालिकाले वितरण राहतको बोराभित्र नेकपा एमालेको चिठ्ठी कसरी पुग्यो ? - Everest Daily News
इटहरी उपमहानगरपालिकाले वितरण राहतको बोराभित्र नेकपा एमालेको चिठ्ठी कसरी पुग्यो ?
धरान । सुनसरी सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिकाले मंगलबार १२ घर परिवारलाई राहतस्वरुप चामल, दाल लगायतका खाद्यान्न वितरण गरेको थियो । तर, उपमहानगरपालिकाले वितरण गरेको राहतको चामलको बोराभित्र नेकपा एमालेको चिठ्ठी भेटिएको छ ।
इटहरी ३ स्थित सुनौलो टोलमा एक सय १२ परिवारलाई उपमहानगरले राहत वितरण गरेको जनाएको छ । राहतमा एमालेको चिठ्ठी भेटाएको इटहरी वडा नं. ३ का वडाध्यक्ष बालकृष्ट विष्टले जानकारी दिए । उनले भने उपमहानगरको स्वामित्वमा रहेको राहतमा व्यापक राजनीतिकरण भएको छ ।
इटहरी उपमहानगरपालिकाकी उपमेयर लक्ष्मी गौतमले एमालेले उपमहानगरपालिकालाई उपलब्ध गराएको राहत सामग्री सुनौलो टोलमा वितरण गरेको बताईन्।
नगरपालिकालाई दिइसकेपछि नगरपालिकाको नै हुन्छ, हामीले नगरपालिकाकै ट्याक्टरमा लगेर पनि वितरण गर्यौँ, पार्टीको चिठ्ठी रहेको थाहै नभएको बताईन ्। गौतमले नगरपालिकाले वितरण गरेको राहतमा पार्टीको चिठ्ठी हुन नहुने पनि उनले तर्क गरिन्।
चिठ्ठीमा लेखिएको छ कोभिड १९ को दोस्रो लहरको संक्रमणबाट त्यस टोलबासीहरु पनि संक्रमित भएको खबर सुन्दा हाम्रो पार्टी नेकपा एमाले इटहरी उपमहानगर कमिटि अत्यन्तै दःखी छ । एमाले इटहरी नगर अध्यक्ष यामकुमार सुब्बाको हस्ताक्षरमा जारी चिठ्ठीमा पहिलो चरणको राहत स्वीकार गर्नका लागि भन्दै सम्बोधन गरिएको छ ।
दुई दिन अघि जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीले जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा एकद्धार प्रणालीले राहत वितरण गर्ने र अन्य मानिस वा संस्थालाई राहतको नाममा कुनै रकम र जिन्सी सामाग्री नलिन निर्णय गरेको थियो ।